ImeyileButler: Okokugqibela, uMncedisi weApple Mail leyo Rocks! | Martech Zone
Njengoko ndibhalela oku, ngoku ndithunyelwe ngeposi isihogo. Ndinee-imeyile eziyi-1,021 ezingafundwanga kwaye ukungaphenduli kwam kugqibela kwimiyalezo ethe ngqo kusetyenziswa imidiya yoluntu, iifowuni kunye nemiyalezo ebhaliweyo. Ndithumela malunga ne-imeyile ezingama-100 kwaye ndifumana malunga ne-imeyile ezingama-200 yonke imihla. Kwaye oko akubandakanyi ukubhaliswa kweleta zeendaba endizithandayo. I-inbox yam iphume kulawulo kwaye ibhokisi engenayo zero yinyani kum njengedayinaso epinki.
Ndithumele itoni yezixhobo zokuncedisa kwaye bendihlala ndiphoxekile, ndibaphosa bonke ndibuyele kwiApple Mail eneeflegi, iifilitha, kunye noluhlu lweVIP yiminwe endiyisebenzisayo ukucofa idama. Akwanelanga, nangona kunjalo. Ndisakhathazekile. Ndifuna ukulawula amaza ezicelo ngcono. Kwaye ndiyazi ukuba kuzo zonke ii-imeyile ezingamakhulu ambalwa, kuhlala kukho ithuba lamathuba kwisibini endifanele ukuba ngaphezulu.
Malunga neveki ephelileyo, uThaddeus Rex, a ingcali brand esebenza nathi kubaxumi abanokuthi okanye abangazange bandibone ngokungxolayo ndilila phambi kwebhokisi yam, ndazise malunga Imeyile yeButler. Ngokungafaniyo neqonga lamaqela wesithathu ahlola okanye athabathe ibhokisi yakho engenayo, iMeyileButler sisongezo esidibanisa ngaphandle komthungo kunye neApple Mail. Kulungile ukuba iApple kufuneka inyanzele le nkampani kwaye yongeze ezi zinto ngokungagqibekanga.
Snooze -Ngokususa i-imeyile uyakuyenza ukuba inyamalale okwethutyana kwi-inbhoks yakho.
umkhondo -Yazisa ukuba ngaba umamkeli uyivulile imeyile yakho. Esi sisixhobo esimnandi soochwephesha kuphuhliso lweshishini ukubona ukuba ithemba liya kuvula i-imeyile yabo yangaphakathi okanye yesindululo.
Ishedyuli - Cwangcisa iimeyile zakho ukuba zithunyelwe ngomhla kunye nexesha elizayo.
Qhaqha ukuthumela Okwexesha elithile unokulungisa ukuthunyelwa kwe-imeyile kwaye ulungise iimpazamo ezinokubakho.
IziTyikityi -Yila iisayinithi ze-imeyile ezintle ngokukhetha phakathi kweetemplate zazo ezahlukeneyo.
Layisha ilifu -I-MailButler ilayishe ngokuzenzekelayo iifayile ezinkulu kwifayile kwaye yongeza amakhonkco ahambelana nomyalezo wakho endaweni yoko.
Isikhumbuzi sesiqhoboshelo -Ungaze ulibale ukuncamathisela ifayile kumyalezo kwakhona owukhankanyileyo kwisicatshulwa somyalezo.
Imifanekiso ye-Avatar -NgeMailButler umthumeli we-imeyile unokubonwa ngokulula ngumfanekiso wabo obalabala.
I-inbox ethe ngqo -Fikelela kwiibhokisi zakho zeposi ezisetyenziswa rhoqo ngqo kwi-bar yemenyu-unqakrazo olunye kude kuyo yonke indawo
I-Emojis -Ezo icon zithandekayo ziyinxalenye yonxibelelwano lwangoku… ngoku kwii-imeyile, nazo.
Ungabhalisi -I-MailButler yenza kube lula kunangaphambili ukuba ungabhalisi kwiincwadana ezingafunekiyo: Unqakrazo olunye!
Nalu udubulo lwendlela elula ngayoImeyile yeButler ukuhlela imisebenzi. Olunye lweempawu endizithandayo kukuba ligcina useto lwam lokugqibela-ke ndinalo Usuku olulandelayo lweShishini ngo-8: 00 AM. Oku kuhle kuba andibakhathalelanga abantu ngokubona ukuba ndiphendula i-imeyile yabo ngo-2: 48 AM, heh.
ImeyileButler Iimpawu ezizayo
imisebenzi -Phawula ii-imeyile zakho njengokwenza izinto ukuze ungaze ulibale malunga nemisebenzi ebalulekileyo kwakhona.
Ikhefu lebhokisi engenayo Yiba nekhefu, yiba ne-MailButler: Khubaza ngokuzenzekelayo iiakhawunti ezithile ze-imeyile ngokusekwe iiyure zakho zokusebenza
Quote -Yabelana ngokukhawuleza ngesicatshulwa esivela kumyalezo we-imeyile kwezinye iinkqubo okanye iinkonzo.
Giphy -NgeMailButler unokufikelela ngokuthe ngqo kwimifanekiso eqingqiweyo ye-trazillion ukuze uzive ngcono.
Faka iMailButler SIMAHLA!
Ndonwabile kakhulu Imeyile yeButler has Ikhefu lebhokisi engenayo phawu phantsi kophuhliso. Amaxesha amaninzi sifumana ii-imeyile zasebusuku zivela kubaxhasi abanezicelo esitsibela kuzo. Ayikuko ukuba asifuni kuphendula, kodwa sihlala siqeqesha abathengi bethu ukuze bakwazi ukunxibelelana nathi nangaliphi na ixesha lasemini okanye lobusuku… hayi isenzo esihle kuba asiloSebe lenkxaso. Ndingathanda ukumisa kancinci ukufumana ii-imeyile kude kube lusuku olulandelayo lweshishini. Abathengi bethu abanokuba nongxamiseko banokuhlala besitsalela umnxeba.
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa ikhonkco lam lokuthumela kwisithuba ngethemba lokuba itoni yakho oyifakayo kwaye uyihlawule le nkonzo kwaye ndingayifumana simahla! 🙂
tags: imeyile yeapileilifu lemeyile yeapileI-imeyile imeyile emojisUkucwangciswa kweposi yeapileUkulandelwa kweposi yeapileimeyile yeapile ungazikhupheliemailibhokisi engenayo zeroiposiumthengisi weposi
I-AdCat: Jonga kuqala, uQokelele, uhlele kwaye usebenze ngokuLungileyo kwiMifanekiso yakho yeNtengiso yeendaba